Saamaynta iyo dhibaatooyinka kiniinka ilmo soo tuurista | Maamulida xanuunka ka dib qaadashasa Kiniinka Ilmo iskasoo Tuurista | HTU
Su’aalaha lanaga Weydiiyo Badanaa Kiniinka Ilmo iska soo Tuurista
Yaa isticmaali kara Kiniinada Ilmo iska soo Tuurista?
Waxaan ahay gabadh aad u weyn (ama aad u buuran), miyaan u baahnahay inaan isticmaalo kiniino badan?
Ka waran hadii aan ogaado inaan uur mataano ah leeyahay?
Miyuu kiniinka ilmo iska soo tuurku ka wax tar yaryahay hadii aan horey u isticmaali jirey?
Ma qaadan karaa daawada Misoprostol intuu igu jiro IDU?
Miyaan qaada karaa daawada Misprostol inta aan naasnuujinayo ilamaha?
Ma isticmaali karaa kiniinka ilmo iskasoo tuurista hadii aan leeyahay HIV (Aydhis)?
Hadii dhiigaagu yaryahay (dhiiga casi ku yaryahay dhiigaaga), raadi bixiye daryeel caafimaad oo aan kaa maqnaan karin in kabadan 30 daqiiqo si uu kaaga caawiyo hadii aad u baahan tahay. Hadii dhiigaagu aad u yaryahay, la tasho dhakhtar ka hor intaanad isticmaalin kiniinka ilmo iskasoo tuurista.
Ma dhib ayuu leeyahay kiniinka ilmo iskasoo tuuristu hadii qaliin hore la igu sameeyey?
Hadii aan isticmaalo kiniinka ilmo iska tuurista oo aan walina uur leeyahay intaas ka dib, ilmuhu miyuu ku dhalanayaa cilado caafimaad?
Horey ayaan isku soo xaaqey (nadiifiyey). May shaqeyn waxaanan yeeshay uur. Uurku wuxuu ku jirey tuyuubka (xaalada ilmuhu galo meel ka baxsan ilmo galeenka). Hada uur ayaan leeyahay marlabaad. Ma caadi baa hadii aan isticmaalo kiniinka ilmo iska soo tuurista?
Sideen ilmo iskaga soo ridi karaa hadii aan qabo xaalada uurka ee ka baxsan ilmo galeenka?
Noocyada Kiniinka Ilmo Iskasoo Tuurista iyo Isticmaalkooda
Sidey u shaqeeyaan kiniinada ilmo iska soo tuuristu?
Maxay qabataa daawada misoprostol?
Maxay daawada mifepristone tartaa?
Ma ku isticmaali karaa misoprostol guriga?
Ma cabi karaa biyo ka dib marka aan qaato Misoprostol?
Ma cabi karaa biyo ka dib marka aan qaato Mifepristone?
Ma waxaan Misoprostol ka qaataa xubinta taranka dumarka mise afka?
Waa maxay farqiga u dhaxeeya qaadashada misoprostol oo kaliya iyo qaadashada labadoodaba mifepristone and misoprostol?
Sidee bay wax tar u leedahay misoprostol, sideebayna waxtar u leedahay misoprostol + mifepristone?
Maxaan ugu baahanahay inaad qaado misoprostol badan hadii aan horey u qaatay mifepristone?
Qofna miyuu ogaan doonaa inaan ilmo iska soo tuuray anigoo isticmaalaya kiniinka ilmo soo tuurista
Khilaafaadka Kiniinka Ilmo iska Tuurista
Duruufo noocee ah ayay tahay inaanan ku qaadan kiniinka ilmo iska soo tuurista guriga dhiexdiisa?
Saamaynta iyo dhibaatooyinka kiniinka ilmo soo tuurista
Intee in lee goo dhiigbax iyo xanuun ah ayaa caadi ah ka dib marka aan qaato misoprostol?
Ka waran hadii aanan dhiig bixinba ka dib markaan qaato misoprostol?
Ka waran hadii aan aa u dhiigbaxo ka dib markaan qaato kiniinka ilmo soo tuurista?
Maxaan samayn karaa si aan u maareeyo xanuun kasta ka dib markaan qaato kiniinka ilmo soo tuurista?
Si caadi ah wax ma u cuni karaa ka dib markaan qaato kiniinka ilmo soo tuurista?
Wax dareere ah ma cabi karaa ka dib markaan qaato kiniinka ilmo soo tuurista?
Ma cabi karaa khamri alkool inta lagu guda jiro iyo kadib marka aan qaato kiniinka ilmo soo tuurista?
Muddo intee leeg ayay qaadanaysaa inay tagaan calaamada saamaynta ee kiniinka ilmo iska soo tuuristu?
Ma iska caadi baa inaad dareento xanuun ama yalaalugo ka dib markaad qaadato misoprostol?
K a waran hadii aan wali uur leeyahay ka dib markii aan qaatay kiniinka ilmo soo tuurista?
ilmo soo tuurista iyo ilmo beermista mustaqbalka
Dhaksho intee leeg Ayaan uur ku yeelan karaa mar labaad ka dib markaan ilmo xaaqay?
Kiniinka ilmo xaaqistu ma ku sababi karaa cilado dhalasho ilmahayga mustaqbalka?
Miyay qaadashada kiniinka ilmo xaaqistu sii adkayn kartaa inaan uur yeesho mustaqbalka?
Su’aale kale oo badanaa la is waydiiyo
Ilmo xaaqistu ma maxa weeyi hab laga hortago uurka?
Waa maxay farqiga u dhaxeeya kiniinka ilmo xaaqista iyo subaxda ka danbaysa kiniinka ( uurk ka hor tagida deg dega ah)?
Ilmo xaaqista dawada la isticmaalaa ma la mid baa ilmo xaaqista kiniinka la isticmaalo? Imo xaaqista dawada la isticmaalaa ma la mid baa ilmo xaaqista qaliinka ah?
Sideen kuula soo xidhiidhi karaa macluumaad dheeeri ah?
Qaado 3-4 kiniin ( 200mg) 6-8 saacadood oo kasta si aad yarayso xanuunkaaga. Xasuusnoow inaad sidoo kale isticmaali kartid ibuprofen ka hor intaadan isticmaalin misoprostol.
Medical management of abortion. Geneva: World Health Organization; 2018. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278968/9789241550406-eng.pdf?ua=1